Faka iVirtualBox 5.2.8 kwi-Ubuntu 17.10 | Ubunlog
VirtualBox sisixhobo esithandwayo esiphambanweni seqonga, esinokuthi ngayo sisebenzise nayiphi na inkqubo yokusebenza (undwendwe) kwinkqubo yethu yokusebenza (umgcini). Ngoncedo lweVirtualBox Sinakho ukuvavanya nayiphi na i-OS ngaphandle kokuhlengahlengisa izixhobo zethu.
Phakathi kweenkqubo ezisebenzayo ezixhaswa yiVirtualBox ziGNU / Linux, Mac OS X, OS / 2, Windows, Solaris, FreeBSD, MS-DOS, nezinye ezininzi. Apho singenakho ukuvavanya iinkqubo ezahlukeneyo kuphela, kodwa kananjalo Sinokuphinda sisebenzise ithuba lokuvavanya izixhobo kunye nokusetyenziswa kwenye inkqubo engeyoyethu.
Okwangoku I-VirtualBox ikwinguqulelo yayo yakutshanje 5.2.8, izisa ukuphuculwa okuninzi phakathi kwayo Sifumene inkxaso ethe ngqo yeLinux kernel 4.15. Mhlawumbi ezinye zezona zinomdla kukuba izilungiso eziyimfuneko sele zenziwe kukhetho lwe-3D oluye lwadala iimpazamo ezahlukeneyo.
KwiLinux, uphuculo oluninzi sele lutyaliwe, njengaleyo igqabileyo ngenkxaso yeKernel yangoku, ikwacwangcise ibug eyenze iwindow yeVirtualBox Iya kwenza ubungakanani kwakhona ngokuzenzekelayo xa utshintsha ubungakanani bescreen.
Sikwafumene izilungiso ezininzi kumculo nakwividiyo, ye Olunye uphuculo esilufumana kwibhokisi ebonakalayo zezi zilandelayo:
Olunye utshintsho oluphawulekayo kunye nophuculo olubandakanyiweyo kwi-Virtualbox 5.2.8 ukukhutshwa kubandakanya:
Inkxaso ye-FSGSBASE, i-PCID, imisebenzi ye-INVPCID CPU yeendwendwe
Ukuphucula ubungakanani kwakhona beewindows ezizenzekelayo kwizikrini zeHiDPI
Isisombululo sokuhlengahlengiswa kwemowudi yokudityaniswa
Ukuqhekeka okungagungqiyo xa uvula iWizard yoMatshini omtsha.
Inkxaso eyongeziweyo yokwahlula imithombo yokurekhoda kumxube wePulseAudio kumamkeli xa usebenzisa oomatshini abaninzi.
Ukugcina: Ukubhala ngaphezulu kokubhaliweyo kwedatha ethile yeDVD / CD drive eqhagamshelwe kumlawuli we-AHCI.
Ukugcina: Imifanekiso eLungisiweyo yeVMDK edalwe nguAmazon EC2 VM Export
Inethiwekhi: I-PXE boot regression emiselweyo kwi-e1000
Umsebenzi wothungelwano-owongeziweyo wokusebenzela iindwendwe ezindala ezingavumeli idomeyini yebhasi kwifowuni ye-virtio PCI
Ukuphuculwa kwe-backSound backend
Eyona fayile ijonge inkxaso kwiifayile ezirekhodiweyo kwiFirefox
Ukulinganisa kwe-HDA kwiindwendwe zeWindows
Lungisa isikrini esimnyama xa i-3D inikwe amandla kwiindwendwe zeLinux
Cinezela iseti, iseti kwiifolda ekwabelwana ngazo kwiindwendwe zeLinux
Uyifaka njani iVirtualBox 5.2.8 ku-Ubuntu?
Ukuba sele unenguqulo yale software efakwe kwikhompyuter yakho kwaye ufuna ukuvuselela kule nguqulo Ndikucebisa ukuba ukhuphe into ekufuneka uyiphephe kwiingxaki, oku kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Ngoku siqhubeka nokufaka ingxelo entsha, Siyaqhubeka kwisiphelo sendlela kwaye senze le miyalelo ilandelayo:
Kuqala kufuneka songeze indawo yokugcina kwimithombo yethu yolwazi
Ngoku siqhubeka nokungenisa isitshixo soluntu:
Ngoku siqhubeka nokuhlaziya uluhlu lwethu lwezinto zokugcina:
Kubaluleke kakhulu ukuba noku kulandelayo, ukuze siqinisekise ukusebenza kweVirtualBox:
Kwaye ekugqibeleni siyaqhubeka ukufaka usetyenziso kwinkqubo yethu:
Ngoku ukuqinisekisa ukuba ufakelo lwenziwe:
Njengenyathelo elongezelelweyo Sinokuphucula ukusebenza kweVirtualBox Ngoncedo lwephakeji, le mpahla yenza ukuba iVRDP (iProthokholi yeDesktop ekude), isombulula ingxaki ngesisombululo esincinci esenziwa yiVirtualBox kunye nolunye uphuculo.
Ukuyifaka, sebenzisa le miyalelo ilandelayo:
Samkela imigaqo kunye neemeko kwaye sifaka iphakheji.
Ukuqinisekisa ukuba ifakwe kakuhle:
Kwaye kunjalo, sele sine-VirtualBox efakwe kwinkqubo yethu, kuya kufuneka uye kwimenyu yakho yezicelo kwaye uyiqhube. Ngoku kuhlala kuwe ukuba uthathe ithuba lezibonelelo esizifumana kule nkqubo inkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Faka i-VirtualBox 5.2.8 kwi-Ubuntu 17.10
Okwangoku ndineWindows XP efakwe kwikhompyuter yam. Ndicinge ngokubeka i-Linux OS kwisahlulelo esahlukileyo okanye kwihard drive. Ukuba ndifaka ibhokisi ebonakalayo phantsi kweLinux. Ndidinga ukufaka kwakhona iWindows XP yeWindows okanye ndingayenza isebenzise ekhoyo kwisahlulelo okanye kwihard drive? Endingakufuniyo kukufaka zonke iinkqubo ezisebenza phantsi kwe-XP.
Yeyiphi Ubuntu kunye nebhokisi ebonakalayo oyicebisayo?